चीन खाना पैकेज लेबल, अनुकूलित मुद्रित भोजन लेबल - क्रिस्टल कोड टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
जीवंत, कुरकुरा रंग जुन हाम्रो डिजिटल प्रिन्ट प्रेसले प्रत्येक प्रकारको विशेष खानाको लागि उत्तम खाना उत्पाद लेबल सिर्जना गर्दछ। जब तपाईं खुदरा स्टोरमा आफ्नो खाना उत्पादन बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई उपभोक्ताको ध्यान खिच्ने कस्टम खाना लेबलहरू चाहिन्छ। तपाईंको खाद्य उत्पाद लेबल साँच्चिकै तपाईंको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मार्केटिंग वाहन हो र तपाईंको उत्पादन को सफलता बनाउन वा तोक्न सक्छ। हाम्रो राज्यको अत्याधुनिक लेबल मुद्रण प्रविधिसँग तपाईंको अनुकूलन भोजन लेबलहरू प्रमुख राष्ट्रीय ब्रान्डहरूको खाना लेबल भन्दा राम्रो वा राम्रो देख्न सक्नेछन्।
सुन्दर, टिकाऊ लेबलहरू
फलफूलहरू, सब्जियां, ससहरू, नाकाहरू, मसालेहरू, सीजनहरू, र धेरैका लागि खाना लेबल हुनसक्दछ किनभने तिनीहरू केही पर्यावरणीय अवस्थाहरू जस्तै नमी, सूर्य, र रसायनहरू सामना गर्न पर्याप्त बहुमुखी हुनुपर्छ। हामी खाद्य उत्पादन लेबलहरू बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्ररी विधिहरू बुझ्दछौं जुन पर्यावरणीय कारकहरू खारेज, ब्लीडिंग, वा स्फुडिंग बिना खडा हुन सक्छ।
तपाईंको खाद्य लेबलहरू खडा गर्नुहोस्
ब्रान्डहरू ठूलो र साना बीच प्रतिस्पर्धा ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न भिजुअल रूपमा अपिलिङ प्याकेजिङ्गको लागि माग बढेको छ। आस्तीन लेबलहरू कवर बोतलेंहरू र कन्टेनरहरू हरू घुमाउने ग्राफिक्ससँग सिङ्क गर्नुहोस् जसले वरिपरि घुमाउँदछ र 360-डिग्री कवरेजको लागि किरणहरू लुकाउँदछ। न केवल तिनीहरू राम्रो देख्छन् तर तिनीहरू पनि एक प्रचुर मात्रामा छेपारो-स्पष्ट मुहर उत्पादन सुरक्षाको लागि आस्तीनमा समावेश गर्न सक्छन्।
प्राकृतिक, जैविक, र "नि: शुल्क" विकल्पहरूको रूपमा उपभोक्ताहरू बीच धेरै लोकप्रिय हुन्थ्यो, लेबलले तपाईंको उत्पादन र ब्रान्डको सकारात्मक गुणहरूलाई जोड दिन मद्दत पुर्याउन सक्छ। रंगीन वा बनाइएका उत्पाद सामग्रीहरू खडा गर्न लेबलहरू खाली छन् तर खाली खैरो कारीरका कागजहरू रितिक, प्राकृतिक रूप हो।
तपाईंको सबै खानाको लागि खाना लेबल बनाउनु होस्, चाहे तपाईंलाई तिनीहरूलाई कपकोक, जाम, वा क्यासरोलसको लागि चाहिन्छ। एलर्जीको लागि, ग्लुटेन फ्रि, कुनै डायरी, वा पनीरको लागि मात्र, र थपको लागि चेतावनी लेबलहरू बनाउनुहोस्। यदि एलर्जीहरू छन् भने लंचहरूमा टाढ्नुहोस्, वा यदि तपाईंले आफ्नो खाना बनाउनु भएको छ भने, तिनीहरूलाई उत्पादहरूमा चेतावनी लेबलको रूपमा राख्नुहोस्। खानालाई फ्रीजरमा भण्डारण गर्ने? तपाईंको कन्टेनरहरू, जारहरू, वा क्यासरोल भाँडाहरूमा फ्रीजर लेबलहरू टाँस्नुहोस्, र जब तिनीहरू बनाइएमा, वा समाप्ति मिति लेख्नुहोस्। के तपाइँ पेशेवर खाना बनाउनुहुन्छ? तपाईंको कम्पनीको लोगो लेबलमा, खाद्य उत्पादनको छवि, वा अवयव सामग्रीहरू समावेश गर्नुहोस्, र तपाईंको लेबललाई तपाइँको कन्टेनरहरू फिट गर्न चाहानुहुन्छ जसलाई तपाईले चाहानुहुन्छ। के यो कफी, चिया, बियर, शराब, वा पानी हो कि होइन ... पेय हुनुपर्दैन, तपाईं यसको लागि एक लेबल सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ क्रिस्टल कोड! यदि तपाइँ आफ्नो पेय पदार्थ बनाउनुहुन्छ भने, कस्टम लेबलहरू बनाउनका लागि तपाईंको उत्पादनहरू अनलाईनबाट बाहिर खडा गर्न एक अनूठा दृश्यावलोकन दिन। चाहे तपाईं आफ्नो पेय कम्पनीको स्वामित्व लिनुहुन्छ, व्यक्तिगत उपहारहरू सिर्जना गर्नुहोस्, वा केवल मजाको लागि मात्र, तपाइँले गर्नु पर्छ सबै स्टिकर शैली छनौट गर्नुहुन्छ र तपाईं जानुहुन्छ! यदि तपाईं पानीको बोतल लेबल खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले माथिको टेम्प्लेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई बोतल वरिपरि लुगा लगाउन, वा तपाईंको प्राथमिकतामा कुनै आकार वा शैली प्रयोग गर्न। तपाईं घटनाको विषयमा फिट गर्नको लागि पक्षहरू, विवाहहरू, वा दान कार्यक्रमहरूको लागि पेय लेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिस्टल कोड लेबलहरू पानी प्रतिरोधी हुन्, र लामो समयसम्म टिक्नका साथ सजिलै सुत्नेछ। यदि तपाइँ एक निजीकृत टच थप्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो लेबल समय अगाडी बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तिनीहरूलाई स्थायी मार्करको साथमा लेख्नुहोस्!
CCHLPP050 गैर अवशिष्ट हटाउन सकिने लेबलहरू
CCHLPET050 सुरक्षा सील लेबलहरू
CCPPT052 पानी घर्षण लेबल
CCPPW040 फल सब्जी लेबल